Ungazihlanza kanjani izinso zakho ngokwemvelo - Afrikhepri Fondation
BNgeshwa, abantu abaningi abazi ukuthi kubaluleke kangakanani izinso nokuthi kubaluleke kangakanani ukuzigcina zisesimweni esihle. Kufanele wazi ukuthi izifo eziningi zibangelwa uhlelo lokuchama ikakhulukazi lapho sazi ukuthi lezi zitho zinomthwalo wokuqeda ukungcola okukhona emzimbeni, iqhaza okufanele lisikhumbuze ukuthi kubaluleke kangakanani zigcine zihlanzekile futhi zisesimweni esihle kakhulu.
Izimpawu ezibonisa ukuphuthuma kokuphulukisa izinso zakho
Uma umfutho wegazi lakho uphansi kakhulu noma uphakeme kakhulu, uma unezinhlungu ezingxenyeni ezingemuva nangaphansi kwesisu, uma umchamo wakho umnyama ngebala, uma womile kaningi, uma unezinhlungu ezisezingeni eliphansi noma uvame ukuya endlini encane ebusuku, lapho-ke kunethuba elihle lokuthi uhlelo lwakho lomchamo lubhekene nokungalingani okuthile.
Ukuchama ngaphansi kwengxenye yelitha ngosuku, uzwe isinye sigcwele sonke isikhathi, unezinhlungu ngesikhathi uchama, ukuvuvukala kwamaqakala ebusuku, ukuvuvukala amehlo ekuseni, nokuqala ama-hematomas ngaphandle kokushaywa noma ukuphuma kwegazi. Konke lokhu nakho kuyimbangela yokukhathazeka.
Okubaluleke nakakhulu, ukutholakala kwama-gallstones noma amatshebhisi ezingeni okhalweni futhi isisu sinesizathu esanele sokuhlanza kwezinso eziphuthumayo.
Ungakugwema kanjani ukungalingani kwezinso?
Ukulawula indlela yokudla kubaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukuvimbela ubuthi bungakhuli emzimbeni, bungene egazini futhi bungaqedwa.
Gwema ukwakheka kwamatshe noma ukwehluleka kwezinso okubangelwa ukudla usawoti omningi noma eminye imikhiqizo esivele iphekwe (ikakhulukazi imikhiqizo efriziwe noma enesinkwa)
Ungayisebenzisi kabi imikhiqizo yobisi, ikakhulukazi ephelele (engasikiwe)
Zama ukunciphisa ukusetshenziswa kwakho kweprothemini yezilwane, inyama noma amaqanda, ngoba iyancipha calcium emchameni, okwandisa ukutholakala kwamatshe.
Gwema ukusetshenziswa kweziphuzo ezidakayo noma ushukela omningi ngoba basiza ukuvimbela ukuqedwa ngokushesha kwe-calcium.
Zama ukulondoloza a Ukudla kwemifino noma ocebile ngokudla kwemvelo. Khetha amajusi enziwe ngemifino noma izithelo
Thatha ukudla nge izakhiwo isisu ezifana amawolintshi, amagilebhisi, lemon, zamapetshisi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, izaqathe, ikhukhamba, ama-aphula, amakhabe, amakhabe, isaladi, medlar kanye ubhamubhamu.
Nciphisa ukusetshenziswa kwe- i-aspirin, ibuprofen, noma eminye imithi efanayo
Phuza amanzi amaningi nsuku zonke (amalitha amabili ebusika namathathu ehlobo) ukuze umchamo ubonakale noma uphuzi kucace bha. Akufanele futhi ihlukunyezwe futhi iphoqe izinso ukuthi zisebenze kakhulu.
Ungazihlanza kanjani izinso zakho ngezinsuku ezi-3?
Asikho isixazululo somlingo esingaqinisekisa izinso ezihlanzekile emahoreni angama-72, kepha kusiza kuphela ukuthuthukisa inqubo yokuhlanza. Kufanele siqale ngokuqeda konke ukusetshenziswa kwe- ikhofi, utshwala, iziphuzo ezibandayo, usawoti kanye nokudla okuqukethe amaprotheni amaningi ngalezi zinsuku ezi-3. Kufanele wazi ukuthi imikhiqizo okukhulunywa ngayo iyazicasula izinso futhi ivimbele isinye ekuqedeni ubuthi ngendlela efanele. Faka konke ngamanzi amaminerali, amafilakisi noma i-girasol nama-alimondi.
Hamba usuku nosuku kwasekuseni kanye nengilazi ijusibhilikhi ijusi, ukunciphisa izinga le-calcium esinyeni. Lezi zidalwa zibangela ukuhamba kancane ezinso futhi zivimbela ukuphuma kobuthi emzimbeni, futhi zingumthombo izibalo nezinye izifo ezithinta umchamo.
Phuza ingilazi yejusi enokuqukethwe okuphezulu i-potassium phakathi nosuku. Uzokwenza njengomsizi futhi uhlanzeke ngesikhathi. Ungazenza ijusi lamaqathe, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-parsley nesipinashi.
Ngemuva kwalokho ungaphuza ingilazi ye-liquid chlorophyll, kuyinto enombala oluhlaza ongayifinyelela ngokuhlwanyela utshani embizeni yezimbali, ubusike bese ubuxuba. Iwusizo kakhulu emzimbeni, ithuthukisa i- amasosha omzimba, futhi kusiza ukuhlanza igazi.
Phuza ingilazi yetiyi yembewu ye-watermelon phakathi kwesidlo sasemini nesidlo sakusihlwa. Lesi siphuzo esithambile sinemiphumela emihle esisiza ukusebenza kwezinso nesifiso nokugaya kangcono nokuphuma kokudla okudliwe ngaphambi kokunyama.
Esikhathini sakusihlwa, phuza isanqante noma ijusi le-blueberry ukulawula imvamisa yomchamo.
Ukwengeza, ungadla noma yini oyifunayo ngesikhathi sokudla, ngaphandle kwezilwane nemikhiqizo equkethe amafutha amaningi.
Phuza itiye ngamaqabunga e-mint noma i-dandelion ngaphambi kokunyama, lokhu kuzokusiza ukuxosha umzimba nokugcoba kangcono ukudla ngaphambi kokunyama.
Ubisi lobisi 1000 mg | Ama-capsules ayi-180 yemifino (izinyanga eziyisithupha zokwelashwa) | Ngo-6% uSilymarin no ...
Thenga i- € 20,37
I-SanaExpert Leber Vital Pro, isengezo sokudla sesibindi nezinso, ngokukhishwa kwe ...
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 24,90
Hlanza uphinde welaphe izinso: Amakhambi emvelo
Okusha okungu-5 kusuka ku- € 7,95
Kusetshenziswe okungu-2 kusuka ku-19,88 €
Thenga i- € 7,95
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Septhemba 25, 2021 5: 19 am
I-Cayenne pepper iphikisana nomdlavuza futhi ingayeka ukuhlasela kwenhliziyo ngomzuzu owodwa
Abacwaningi bahlabelela futhi basuse isisu esinomdlavuza ngaphansi kwamehlo akho
I-Kybalion: Ukutadisha ngeHypetic Philosophy yaseGibhithe Lasendulo (Umsindo)
Izithombe ze-Acambaro zibonisa ukuthi uhlobo lomuntu lwaluhlala nama-dinosaurs